မင်္ဂလာပါရှင်.. ဒီဘလောဂ်လေးကို ၂၀၀၆ သြဂုတ်လမှာ စတင်ရေးခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ အိမ့်ချမ်းမြေ့ဒေါ့ကွန်းမှာ စာတွေ ဆက်ရေးနေကြောင်းပါ...။လာလည်သော လူနည်းစု မောင်နှမများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
တစ်စစီ တစ်လွှာစီ ပြိုကျလာနေတဲ့ အုတ်ခဲစတွေလို....ကျမ...ပြိုကျ....။
မွှန်းကြပ်နေတဲ့ လေပူပေါင်းလိုဖောင်း... ကနဲ
တစ်ခွန်းမှ မပြောပါနဲ့လား....တိတ်ဆိတ်တဲ့ ကန်ရေပြင်ပေါ်က
ဟိုး~~ တစ်ခါတုန်းက~~~ ပေါ့ကွယ်~~
ယောင်္ကျားလေးနေရာမှာ မိန်းကလေး ၂ယောက်ပါ....
(မွှေး.... နင့်အနားမှာ ဘယ်သူမှ မရှိတော့တဲ့အချိန်ကျရင်...
ငါ.. နင့်ကို အရမ်းချစ်လို့ပါ..... ..)
အမူအရာတွေ မထိန်းနိုင်အောင် ပျက်နေပေမယ့်....
ကိုယ်ကတော့..... very cool~~~ ပါ...
အဲဒီအဖြစ်ကို ပိုလို့တောင် ရယ်ချင်နေမိတော့တာပါပဲကွယ်.....
( "------" နင့်အနားမှာ ဘယ်သူမှ မရှိတော့တဲ့အချိန်ကျရင်...
ငါ.. နင့်ကို စိတ်ထဲမှာကို မရှိတော့လို့ပါ...)
ကမ္ဘာကြီးက ဘာဖြစ်လို့ အဲသလောက် ဆူညံအုန်းထ နေတာလဲကွယ်….
နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေး၊ အချစ်ရေး၊ နှလုံးသားရေး၊ အိမ်ထောင်သားမွေး၊ မိဘအရေး၊ သားသမီးအရေး၊ မိန်းမအရေး၊ ယောင်္ကျားအရေး၊ လှုမှုရေး၊ ဘဝရှေ့ရေး……..။
စာပေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲ ပစ်မယ်လို့လည်း စိတ်မကူးခဲ့ဘူး၊
လူထုအကျိုးပြု စာရေးဆရာမကြီး လုပ်မယ်လို့လည်း စိတ်မကူးခဲ့ဘူး၊
ဆုတွေတပွေ့တပိုက်ကြီးနဲ့ ဘဝကိုကျေနပ်မယ်လို့လည်း အိပ်မက် မမက်ခဲ့ဖူးဘူး၊
သိထားတာတွေကို အားရပါးရကြီး ဟောပြောမယ်လို့လည်း စိတ်မကူးခဲ့ဘူး၊
ရင်ထဲမှာ ရှိတာလေးတွေကို ဘာသာကြားရုံ
ဘလောဂ်လေးမှာ စာတစ်ပုဒ်ရေးလိုက်ပြီး ကိုယ့်အရိပ်ကိုယ်ပြန်ကြည့်လို့ အကျေနပ်ကြီးကျေနပ်နေတဲ့..
ဟော…. နောက်တစ်နေ့ မိုးလင်းလို့
စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်း တစ်ကယ်ရှာတွေ့ပြီလား မေးချင်သူတွေ….
မင်းကဘာလဲ၊ ငါကဘာလဲ မေးခွန်းထုတ်ချင်သူတွေ…မင်းက ဘာမို့လို့ ဒီလိုစာမျိုးရေးတာလည်းလို့ မေးခွန်းထုတ်ချင်သူတွေ..
စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ ဘယ်သူပိုတော်လည်း မြန်မာစာပြိုင်ပွဲဝင်နေတာလည်း မဟုတ်ရပါဘူး၊ အမှန်အမှားချင်း စီးချင်းထိုးနေတာလည်း မဟုတ်ရပါဘူး၊
တိတ်တိတ်လေး.. ရေးချင်ရာ ရေးခွင့်လေးရှိချင်သူပါ…။
အင်ထရိုဗာ့တွေရဲ့ ပါဝါဖြစ်တဲ့ တိတ်ဆိတ်ခြင်းကို
ဒီလိုနဲ့ အကြိုက်လိုက် ရေးတဲ့အခါလည်းရှိ၊ စိတ်ထဲမှန်တယ်ထင်ရာ ရေးတဲ့အခါလည်းရှိ…
ဟိုအတွေးခေါ် ဒီအတွေးခေါ် ဆွဲသွင်းရေးတဲ့အခါလည်းရှိ…
ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို အရောင်ဆိုးရေးတဲ့အခါလည်းရှိ….နှလုံးသားကို ဟင်းလင်းဖွင့်လို့ အမုန်းခံရေးတဲ့အခါလည်းရှိ....
လူမသိ သူမသိ ဘ၀ကနေ…
စာအုပ်လေး တစ်အုပ်နှစ်အုပ်ကို မဖြစ်ညစ်ကျယ်ထုတ်…
ငါဟာ…အချို့တွေက ချစ်ပြီး၊ အချို့တွေက မချစ်တဲ့...အချို့တွေက ကြင်နာချင်ပြီး၊ အချို့တွေက ရင်နာချင်တဲ့...အချို့တွေက ကြည်ဖြူချင်ပြီး၊ အချို့တွေက ငြူစူချင်တဲ့...
ဘာကြီးမှန်းမသိတဲ့ စီနီယာဘလောဂါဆိုတဲ့ ဘွဲ့ကြီးကိုပိုက်လို့..
မွန်းကြပ်မှုတွေ နားညည်းမှုတွေနဲ့ အသက်ရှု မဝ မှုတွေ….
အသက်ရှုရ အရမ်းကို မွန်းနေပြီ………
ငါ မေ့ထားခဲ့တဲ့ ဘလောဂ်လေးကို ပြန်ရောက်..
~~~~ ထား ~~
ထား.. တစ်ယောက်ရယ် ရွှင်လန်းစေ...း))
ကိုယ်လေ ထားအတွက်ဆို နေခဲ့မယ်......... ~~~~ဘယ်သူမှ မထားခဲ့ပါဘဲ...
တစ်ခါမှ ချက်မစားဖူးတဲ့ ကြက်သည်းကြက်မြစ်တွေ ချက်စားရင်း................I feel disgusted!~ sorry!!..
ကြည့်တောင် မကြည့်ချင်တော့ဘူး... ကြက်သည်းကြက်မြစ်ဆိုရင်...
ဘာကို လွမ်းမှန်း မသိဘူး...
Will Smith's After-the-rain မိုးတွေ ညိုတော့..
ပူလောင်မှုနဲ့ တွဲတဲ့ အလွမ်း...
နေမထိလို့ ထိုင်မရတဲ့ အလွမ်း....
လှေကားတက်ဆင်း၊ နင်းရတဲ့ အလွမ်း...
အိပ်ရာထဲ လူးလှိမ့် ငိုကြွေး၊ ဆွေးရတဲ့ အလွမ်း...
သူငယ်ချင်း စကားသံတွေ ကြား၊ ခါးခါးသီးသီး လွမ်းရတဲ့ အလွမ်း..
အဲသလို မဆန်း၊ လွမ်းတဲ့ အလွမ်းတွေ ရှိတတ်သတဲ့..။
မှန်ပြူတင်း မိုးစက်.. တလက်လက် အနားထိုင်
ဆွေးဆွေး လေး မှိုင်တယ်..။
ပြူတင်းကိုဖွင့် မိုးပွင့်လေးတွေကို ထိတယ်..။
မိုးပွင့်လေးကို ဆွတ်ခူး၊ ယဉ်ယဉ်လေး ရူးတယ်။
မိုးပန်းလေးကို နမ်း၊ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ရယ်မောတယ်..။ တစ်ကိုယ်လုံး စိုတဲ့မိုး... ညိုတဲ့ မိုး....
ချစ်တယ်။ ညို့မှိုင်းတဲ့ မိုး၊ စိတ်ကူးလေး နဲ့ ခိုးလို့ နမ်းတော့..
အလွမ်းတွေက ပန်းတွေမျောတဲ့ စမ်းရေကြောနှယ်..။
အို.... လှလိုက်တာ.. မိုးရယ်..။
Painting: “Morning on the Seine in the Rain” by Claude Monet
စမ်းချောင်းလေးက တိတ်ဆိတ်ငြင်သာစွာ စီးဆင်းလို့နေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ငှက်ကလေးတွေရဲ့ အော်မြည်သံကလွဲလို့ အရာအားလုံးက ငြင်သာသိမ်မွေ့နေသည်။ စမ်းချောင်းလေးထဲမှာ ကျောက်တုံးတွေကို ရေစီးပွတ်တိုက်သံ၊ သစ်ရွက်မျောပါသွားသံ.. ကုန်ကုန်ပြောရရင် ပေါလောမျောပါလာတဲ့ ပူစီပေါင်းကလေးတွေ ဖောက် ကနဲ ပေါက်သွားသံတောင် ကြားရတော့ မလောက် တိတ်ဆိတ်နေသည်။ စမ်းချောင်းလေးဘေးက လမ်းကလေးအတိုင်း သူမ လျှောက်လာခဲ့သည်။ ရွက်ကြွေတွေကို ဖြတ်နင်းလိုက်တိုင်း ရွက်ခြောက်ကြေမွသံတွေက သူမခြေထောက်အောက်မှ ခပ်တိုးတိုး တိုးထွက်လာနေသည်။ ခြေဖမိုးအနားထိ ၀ဲကျနေသည့် ဂါဝန်အနားစမှာ ရွက်ခြောက် အစအနတို့တောင် ကပ်ပါလာနေသည်။ သူမလက်ထဲမှာ လှပတဲ့ ပန်းစည်းကလေး တစ်စည်း။ ပန်းစည်းလေးထဲမှာ နှင်းဆီပန်းအ၀ါတွေလည်း ပါသည်၊ အမည်မသိ ပန်းဖြူဖြူတွေလည်း ပါသည်၊ ရိုးတံသွယ်သည့် အစိမ်းရောင်ပန်းတွေလည်း ပါသည်။ ပန်းစည်းကလေးကို သူမ ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်သည်။
တောင်ကုန်းကလေးအတိုင်း သူမ ဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်။ သူ့ဆီ ရောက်တော့မည်။ သူနှင့်သူမ သိပ်ချစ်ခဲ့ကြသည်။ သိပ်ချစ်ခဲ့ကြသလောက် စကားပြောအပေါက်အလမ်းတော့ တစ်ခါမှ မတည့်ခဲ့ကြ။ သူမက စကားပြောသိမ်မွေ့သလောက် သူက မာကျောကျောနိုင်လွန်းသည်ဟု သူမထင်သည်။ စကားပြော မနူးညံ့သော သူသည် ပုဆိုးရှည်ရှည်ဝတ်ပြီး ညင်သာစွာတော့ လမ်းလျှောက်တတ်လေသည်။
'ကျနော် မ နဲ့ မခွဲနိုင်ဘူး' သူ့အသံတွေကို ပဲ့တင်ထပ်ကာ ကြားနေရသည်။ သူ.. သူမကို စောင့်နေရာ ၀က်သစ်ချပင်ကြီးဆီကို သူမ အမြဲရောက်သည်။ အထူးသဖြင့် သူ၏ မွေးနေ့တွေမှာ မပျက်မကွက်ရောက်လေ့ရှိသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်မွေးနေ့မှာ သူ့ဆီကို သူမ ရောက်အောင် မသွားနိုင်ခဲ့။ မသွားနိုင်လောက်အောင် ကိစ္စတွေက ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဒါကို သူခွင့်လွှတ်လိမ့်မည်ဟု သူမ မျှော်လင့်နေမိသည်။
"ဒီနှစ် မောင့်မွေးနေ့ ကျမ နောက်ကျသွားတယ် မောင်ရယ်" ၀က်သစ်ချပင်ကြီး အောက်ကို ရောက်လာခဲ့ပြီ။ သစ်ပင်ကြီးနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ သူ့ကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရသည်။ သူရှိရာသို့ သူမ ခြေလှမ်းသွက်သွက်ဖြင့် လျှောက်သွားလိုက်သည်။ အနားကို ရောက်လာတော့ သူမ မျက်လုံးကို သူမ မယုံနိုင်။
"ဘာတွေလဲ.... ဟင်... ဘာတွေလဲ မောင်ရယ်..." "မောင်.... မောင့်မှာ အခြားတစ်ယောက် ..."
တိတ်တိတ်လေး ချစ်ခဲ့ရသူပါ.... မောင်.......
ဆရာဦးထွန်းလွင်ဟာ ဆရာမောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)ရဲ့ ကဗျာနဲ့ ဖွင့်ထားပါတယ်။ ဆရာမောင်စိန်ဝင်းရဲ့ အမည်ကို ကဗျာလေးအောက်မှာ ရေးထားတယ်။
ဟောပြောပွဲ အခွေကို ကြည့်ရသူတစ်ဦးကလည်း ပြောပါတယ်...။
ဆရာဦးထွန်းလွင်ရဲ့ ဟောပြောချက်တွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ရင်တွင်းဖြစ် စာသားတွေကို အခြားဆိုက်ဒ်တွေမှာ ဆက်လက်ဝေမျှထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အိမ့်ချမ်းမြေ့ ဆိုတဲ့ အမည်ကို လုံးဝ မတွေ့ရပါဘူး။
စိုးလွင်လွင် ဆိုတုန်းကလည်း အရမ်းနှစ်သစ်ခဲ့တယ်.. မျိုးကျော့မြိုင် ပြန်ဆိုတော့ ပိုတောင် နှစ်သက်ပါတယ်.. မျိုးကျော့မြိုင် အသံက နောက်ခံဂီတနဲ့ တစ်ထပ်တည်း ငြိမ်ပြီး ထွက်လာတာ...
ခပ်ရမ်းရမ်းနဲ့.. ပက်စက်စွာ လွမ်းတယ်...
Ain Chann MyayCreate Your Badge
``ခွန်အားဖြိုးမောက် ABC Stout......´´
ပနျးပှငျ့လေးရဲ့ ပှငျ့ဖတျတှကေို ခြှခေလြိုကျမိမယျဆိုရငျ ပနျးကလေးအလှကိုလညျး ခံစားရတော့မယျ မဟုတျပါဘူး။(ဖွန့်-ယူနီကုဒ်)ပန်းပွင့်လေးရဲ့ ပွင့်ဖတ်တွေကို ချွေချလိုက်မိမယ်ဆိုရင် ပန်းကလေးအလှကိုလည်း ခံစားရတော့မယ် မဟုတ်ပါဘူး။(ဇော်ဂျီဖွန့်)
Gregorian Inspired Chant
ဖူးငုံ (ဆယ်ကျော်သက် မဂ္ဂဇင်း)
Download Myanmar (Zawgyi) Font ကျွန်မရဲ့ စာတိုပေစ၊ ကဗျာတို ကဗျာစလေးများနှင့် ဓာတ်ပုံများကို တစ်ခြားတစ်နေရာတွင် ကူးယူဖော်ပြမည်ဆိုပါက ကျွန်မ အိမ့်ချမ်းမြေ့၏ ရင်တွင်းဖြစ်များဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုကာ ဖော်ပြပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်ရှင်။
♫♥♪ ဆီဗုံး ♫♥♪ Copy Protected by Computer tech tips
မင်္ဂလာပါရှင်… ကျွန်မရဲ့ မတောက်တခေါက် စာတိုပေစလေးတွေကို အခုလို အချိန်ပေးပြီး လာဖတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်… ~~My story telling is reshaped by your listening and attentive imagination~~